Chọpụta ihe kpatara onye ọ bụla ji hụ blanket ndị dị arọ nke ukwuu na ire ọrịre otu ụbọchị nke Amazon - bgr - teles relay
Chọpụta ihe kpatara onye ọ bụla ji hụ blanket ndị dị arọ nke ukwuu na ire ahịa otu ụbọchị nke Amazon - BGR
Nụtụla banyere a Thundershirt maka nkịta? Ọ bụ ihu ọma a mkpakọ uwe elu na-eji nwayọọ afanye ha, na e gosiri na-enyere belata oké nchegbu ka i wee zuru ike nke ọma. N'ezie, blanket ndị dị arọ abụghị otu, n'ezie, mana ọ bụ otu echiche. Ezi ibu blanket dị ka ndị Arọ blanket maka ụra, nrụgide na nchegbu ga-etinye oke nrụgide zuru oke. Ga-eju anya etu ha siri dị ike na-enyere gị aka izu ike, ịrahụ ụra ọsọsọ, ma hie ụra ogologo oge, mana akwa mkpuchi dị elu nke emebere iji dịrị adị na-adịkarị oke ọnụ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji were uru ahịa otu ụbọchị Amazon na mkpuchi ike ndọda, nke na-ebelata nke ukwuu 20 paụnd version n'ọnụ ahịa dị ala mgbe ọ bụla na nhọrọ agba abụọ dị iche iche. Tụkwasịnụ anyị obi, ị gaghị achọ ihu nnukwu ọrụ a!
Nke a bụ ozi ndị ọzọ na ibe ngwaahịa:
Na-ata ahụhụ site na ezigbo ụra? Ike ndọda bụ blanket dị arọ buru ibu nke na-eji obere ahụ n'ahụ iji nyere aka melite ụra nke ụra.
AJIGHTO: Dị na nhọrọ 15, 20 na 25 lb; anyị na-akwado ka ịhọrọ nke na-anọchite anya ihe dịka 10% nke ịdị arọ gị. Adịghị họrọ nhọrọ kachasị arọ! Chọrọ kaboodu na 10% nke gị ahu arọ.
SIZE: Ike ndọda bụ 72 "x 48", na-enye ahụmịhe ntọala maka ONE USER n'otu oge. Anyị mere ya na nke a otutu blanket size na-ekwe ka ibu na-ekesa ọbụnadị n'elu onye ọrụ na n'ihi na onye ọrụ ọ bụla chọrọ a kpọmkwem ibu maka ha ahu ibu.
KWU: Ihe mkpuchi mpụta nke dị n'elu bụ obere micro-ajị anụ. A na-eji ezigbo owu na iko na-acha uhie uhie dị n'ime ya, ma na-ejide ya n'ime mkpuchi ahụ site na njikọ bọtịnụ na-agbanwe. Checkered kpachie na dị arọ ime ana achi achi na iko chaplet na-anọ ọbụna kesaa n'oge ojiji.
Ọ D MA MMA: Igwe mkpuchi mkpuchi ahụ bụ ihe a pụrụ ịsa ahụ; ọ bụ naanị aka a ga-eme ya.
Akụkụ akụ na ụba nke Cameroon: ụdị simenti ọhụụ na ụlọ ahịa ngwa ahịa anyị
Jim Carrey kpọrọ "ụra" maka ịchụ nwoke na onye nta akụkọ - ndị mmadụ